नायिका रिजु श्रेष्ठको भदौमा भाग्य परिक्षा हुदै – Namaste Filmy
नायिका रिजु श्रेष्ठको भदौमा भाग्य परिक्षा हुदै
चलचित्र नगरीमा चर्चा थोरैको मात्र हुन्छ । चर्चा ब्यक्तिको राम्रो पक्षको भन्दा नराम्रो पक्षको नै बढी हुन्छ । नराम्रो कुराहरुको हल्ला त चैत्रमासको डडेलो झै भैलिन्छ । त्यस्तै चर्चा चलेको छ नायिका रिजु श्रेष्ठको । नायिकाहरुको हल्ला नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कुनै नौलो घटना नभए पनि नायिका रिजुको भने राम्रो पक्षको चलेकोले भने अलि अनौठो नै छ । उनले भरखरमात्र दुइ चलचित्रमा अभिनय गरेकी छिन । चलचित्र स्टुपिड मन र ठूली ।
डेब्यू चलचित्रमा सुपर स्टार नायक जीवन लुइटेलसँगको विपरित भूमिकामा देखिन्दै छिन भने ठुलीमा सामान्य तर प्रभावशाली भुमिकामा सुपर स्टार नायक जीवनको गर्ल फ्रेन्डको चरित्र निर्वाह गरेकी छिन । चलचित्र रिलिज नै नभइ यस्तो नायिकाको हल्ला कस्ले चलायो त ? ति प्रदर्शन नभइसकेका चलचित्रका निर्माता निर्देशकको नै चर्तिकला हो ? किन यत्रो तारिफ हुँदैछ रिजुको, चलचित्र रिलिज अगावै नै ? पक्कै यस चर्चा कुरा प्रति आशंका पैदा हुन्छ । तर गुँथीकुरा चाहि, यो हल्ला उनको आफ्नै कलाकारिताले गर्दा नै चलेको हो । प्रारम्भमा अमेरिकाबाट अभिनय कलाको प्रशिक्षण लिएर आएकी भने पनि उनले भने अस्विकार गरेकी छिन । कोरा ब्यक्तिले चलचित्र द्धयमा परिपक्क अभिनय गर्नु, कल्पनाशिलतामा नै भावुक हुन सक्नु, भाव परिवर्तन गर्न सक्ने अस्वभाविक क्षमता र खुबी भएकै कारणले उनको चर्चा चलेको चलचित्र ठूलीका सुपर निर्देशक एभरेष्ट सुर्य बोहराले बताउनु भएको छ ।
“वास्तवमा उनले अनस्पेक्टेड बनायो हामीलाई, स्वभाविक अभिनय प्रस्तुत गरेकी छिन । उ उनको तारिफ गरेको होइन, सत्य कुरा लाई हामीले चर्चा गरेका मात्रै हौ” सुपर निर्देशक बोहराको भनाइ रहेको छ । उहाँले प्रष्ट खोल्न नचाहनु भएतापनि रिजुले डेब्यू चलचित्र स्टुपिडमनमा रोएको अभिनयको प्रस्तुतीको क्रममा स्वभाविक र भावुकताका साथ सटको समाप्ति सम्म पनि धेरै समय फर्ममा आउन नसकेको चर्चा सुनेकै कारणले ठूलीमा अनुबिन्धत गर्नु भएको सुत्रले बताएको छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नायिकाको अभाव खडकिरहेको समयमा चर्चामा देखिएकी नायिका रिजुको अभिनय हेर्न भने हामीले भाद्र ६ गते सम्म कुर्नु पर्ने नै हुन्छ । जहिले समाजिक कथावस्तुमा आधारित चलचित्र ठूलीको सर्वत्र रिलिज हुँदैछ । नब नायिका रिजु श्रेष्ठको यी दुई चलचित्र भदौमा रिलिज भए पछि नै उनको चलचित्र नगरीको यात्रा कसरि अघि बढ्छ तेही बेला नै थाहा हुन्छ तेसैले चलचित्र स्टुपिड मन र ठूली उनको लागि भाग्य परिक्षा रहनेछ ।
बाबु र निशाको ‘मेरो भ्यालेन्टाइन’ अष्ट्रेलियामा देखाइदै ।
फुटवलको महाकुम्भमा कस्तो टेन्सन रिलिजको तयारी